फेरि बाढी-पहिरोको जोखिमको चेतावनी, सतर्क रहन आग्रह - Everest Dainik - News from Nepal
फेरि बाढी-पहिरोको जोखिमको चेतावनी, सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौँ, साउन ८ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहिबारसम्म बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको बताएको छ ।
मंगलवारदेखि सुरु भएको वर्षा बिहीवारसम्म कायम रहने देखिएकोले देशभर नै जोखिम बढेको महाशाखाले बताएको छ ।
असारको अन्तिम साता अविरल वर्षाले देशको खासगरी तराइ क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याए पनि यसपटकको मनसुनी वर्षाले पहाडी क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्ने महाशाखाले जनाएको हो।
नेपालमा मनसुन केही दिन निस्क्रिय भएपछि पुन: मङ्गलवारदेखि सक्रिय भएको बताइएको छ।
मौसममा सुधार कहिलेदेखि?
मौसमविद् वरुण पौडेलले बुधवार भने, “खासगरी हिजो रातिदेखि काठमाण्डूबाट पश्चिम क्षेत्रमा बढी पानी परेको देखिएको छ।”
“तर आजरातिदेखि भने देशको पूर्वी भागमा पनि देखिने भएकोले भोलिसम्मै सम्भावित जोखिमबारे ख्याल गर्नुपर्छ। शुक्रवारदेखि क्रमिक रुपमा मौसममा सुधार हुँदै जान्छ।”
उनका अनुसार मनसुन सक्रिय वा निस्क्रिय हुने अहिलेको क्रम भदौ अन्तिम अथवा असोजको सुरुसम्मै जारी रहन सक्छ।
गत असार २६ गतेदेखिको वर्षाले निम्त्याएको बाढी पैह्रोजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय नाघेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार गुल्मी र बाग्लुङमा पैह्रो र सप्तरी र सिरहामा डुबानका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ।
मनसुन सक्रिय भइरहँदा बाढी र पैह्रोको जोखिम पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै रहेको मौसमविद्ले बताइरहँदा सरकारले पूर्वतयारीबारे के गरिरहेको छ?
यसबारे देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विपद्को पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
उनले भने, “हामीले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यसै अनुसार सजगता अपनाउन र जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेको मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न निर्देशन दिएका छौं।”
त्यसबाहेक प्रभावित जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरू परिचालित रहेका र जोखिममा रहेका जिल्लामा सचेत रहन भनिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
पश्चिमको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा मंगलवार बिहान सबेरै गएको पहिरोमा परी ९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४ जना बेपत्ता भएका थिए। बीबीसीबाट ।